အကိတ်တွေနဲ့နာမည်ထွက်ပြီးမှ ကျော်ကျော်နန္ဒနဲ့ ပဲ ဇာတ်ပေါင်းဖို့လုပ်နေပြန်တဲ့ ယူနိက်တက် – FBV SPORT NEWS
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်အသင်းဟာလက်ရှိမှာ နာမည်ကြီးကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဟာလန်း ဆန်ချို ဟယ်ရီကိန်းတို့ကိုခေါ်ယူဖို့ နီးစပ်နေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်နေတာဖြစ်ပေမယ့် ယူနိက်တက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကအဓိက ချိတ်ဆက် နေတဲ့ ကစားသမားဟာ အဆိုပါ ကစားသမားများ တစ်ဦးမှ မဟုတ်ဘဲ ဆောက်သမ်တန်အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှုး ဖြစ်သူ ဒန်နီအင်စ့် ဖြစ်တယ် လို့ ဒေးလီးမေးလ်သတင်းကဆိုပါတယ်။
ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ကာဗာနီ ကို စာချုပ် သက်တမ်းမတိုး ခင်က ဟာလန်းနဲ့ဆန်ချိုကို ချိတ်ဆက်ခေါ်ယူဖို့ တစ်ကယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် “ဂျောက်ဂျက်သီချင်းထဲကလိုI Like It Money Moneyဖြစ်နေတဲ့ ဒေါ့မွန်အသင်းရဲ့ ငွေမျက်နာကြည့်ပြီး ခပ်ချေချေဆက်ဆံမှုကြောင့် ဒီတိုက်စစ်မှူးတွေကို စိတ်ဝင်စားမှုလျော့ကျခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ခုခါမှာတော့”သမီးကညာအခါမလင့်ကောင်းဆိုသလိုပျိုတုန်းစွမ်းတုန်းမှာဈေးကိုင်ထားတဲ့ ဒေါ့မွန်ဟာ ဆန်ချိုကို ထုတ်ရောင်းချင်ပေမယ့်
ယူနိက်တက်လိုပဲ နာမည်ကြီးထမင်းငတ်ဖြစ်သွားတဲ့ ဆန်ချိုဟာလည်း ထူးအိမ်သင်သီချင်းလိုလမ်းပျောက်တဲ့သားဖြစ်နေပါပြီ.
ဆန်ချိူဟာ ယူနိုက်တက်က သူ့ကိုတစ်ကယ်ခေါ်ယူချင်တာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့”ရေလာမြောင်းပေးပြောဆိုခဲ့တာတွေတောင်ရှိခဲ့ပေမယ့် ယူနိက်တက်တို့ကတော့ ထီကြီးပေါက်မှQualityကောင်းကောင်းသုံးမယ်လို့ ဘုရားမှာ သစ္စာဆိုထားသလို တုတ်တုတ်မှမလှုပ်တော့ပါဘူး။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ စပါးက တိုက်စစ်မှူးကိန်းက အသင်းကိုထွက်ခွာခွင့်တောင်းလိုက်ပြီး ယူနိက်တက်နဲ့သတင်းတွေထွက်လာပြန်ပါတယ်။
စပါးဘက်ကကမ်းလှမ်းမှုကလည်း ပေါင်သန်း ၉၀အပြင် မာရှယ်ကိုအလိုက်ပေးရမယ့်သဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့တာကြောင့် နပ်ချေးကို ငါးပိလုပ်စားနေတဲ့ ဂလေဇာတို့ ဂုတ်သွေးစုပ်အသိုင်းအဝိုင်းကစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိတော့ပုံရပါတယ်။
အခုတော့ ကိန်းဟာ မန်စီးတီးနဲ့Silent ကပ်တိုးညှိနှိုင်းနေကြပြီး ထုံးစံအတိုင်း နာမည်ကြီးထမင်းငတ် ငါ့ရည်းစားသူများနဲ့ညား မျှော်သာမျှော်သည်မပေါ်ပြီ စတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေနဲ့ နွေဈေးကွက်မှာနာမည်ကြီးတတ်တဲ့ယူဆိုက်တက်တို့ကတော့ သန်း၂၀တန် အလယ်အလတ်တိုက်စစ်မှူးကို စိတ်ဝင်စားမှုပိုပြင်းလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်?
ကာဗာနီကိုစာချုပ်မချုပ်ခင် ယူနိုက်တက်ဘက်က ကိန်းကို ခေါ်ယူ ဖို့ မေးမြန်း ခဲ့သေးပေမယ့် တိုက်စစ်မှုးကာဗာနီကို သက်တမ်းတိုးပြီးချိန်မှာ တော့ ကိန်းလိုကစားသမား မျိုး ထက် ငွေကြေး တန်ဖိုး လျော့နည်းပြီး ခြေစွမ်း အထိုက်လျောက် ရှိတဲ့ ဒန်နီ အင့်ကို ခေါ် ယူရန် သာ စီစဉ်လာခြင်း ဖြစ်တယ် လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ သန်း ၂၀ တန် တိုက်စစ်မှုး ဟာ လက်ရှိရာသီမှာအသင်းပြောင်း ရန်စီစဉ်ထားပြီး ဆောက်သမ်တန် အသင်းကလည်း စာချုပ် သက်တမ်း တစ်နှစ်သာ ကျန်ရှိသည့်အဆိုပါ ကစားသမားကို အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေး ဖြင့် လက်လွှတ်ရမယ် ဆိုးသောကြောင့် ဒီရာသီ မှာရောင်းထုတ်သွားရန် စီစဉ်နေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲဒီတော့ နွေရာသီတိုင်း အပျော်ကြံခံနေရတဲ့ မန်ဖန်တွေအနေနဲ့ရောယူနိက်တက်ကကိန်းကိုခေါ်ယူမယ်ထင်ပါသလား? ဒါမှမဟုတ် အလယ်အလတ်တိုက်စစ်မှူးတစ်ယောက်နဲ့အစားထိုးပြီး ပရီတ်သတ်တွေကို ချွေးသိပ်မယ်ထင်ပါသလား???